Kwenzeke ukuthi izinambuzane emphakathini wethu ziningi kakhulu. Ezinye izicabucabu zenkomo noma imikhosi njengezilwane ezifuywayo, nakwezinye izindawo zeplanethi ezisetshenziselwa ukudla, kodwa ikakhulukazi zibangela abantu ukuba babe namahloni kanye neminye imizwelo emibi. Okuwukuphela kwezimvemvane, nakuba zibheka izinambuzane, kodwa isimo sengqondo emphakathini kubo sihlukile: bayathandwa, bayathandwa futhi basebenzise njengezimbali eziphilayo.
Abamele beqembu leLepidoptera abagcini nje ngokujabula ngokubukeka kwabo kwabanye, badlala indima ebalulekile empilweni yezitshalo - bawavotela. Abantu bakhangwa kakhulu Amaphiko evemvane enobuhle bawo namaphethini, kanti futhi phakathi kwezinhlobo ezingaphezu kuka-200 zezinambuzane, akuzona zonke izinto ezingenabungozi futhi ezinhle njengoba zivame ukukholelwa.
Phakathi kwalezi zidalwa ezithandekayo kukhona nezinambuzane (isibonelo, iklabishi moth noma izithelo moth), ngisho namampires (ezinye izinhlobo ebusuku zihleka). Ngokuphambene nombono ocacile wokuthi amaphiko kavemvane kufanele abe mkhulu futhi emuhle, ezinye izinhlobo zezinhlobo zezinhlobo zezinhlobo zezinhlobo zezinhlobo zezinhlobo zezinhlobo zezinhlobo eziphilayo (ngokuvamile, ezinye ze-volnyanki noma imililo). Iqembu le-Lepidoptera lihluke kakhulu, abameleli balo ngezinye izikhathi abafani nhlobo ngaphandle, noma indawo yokuhlala, noma okuthandayo ukudla.
Ukubuyela kumvemvane ngomqondo weklasiki (labo abadla i-nectar futhi banamaphiko amakhulu), kufanele kuqashelwe ukuthi, njengezinye izinambuzane eziningi, zibukeka njengalezi kuphela esigabeni sokugcina sokuthuthukiswa kwazo. Ukuphila kweLepidoptera kuqala ngamaqanda ukuthi owesifazane uhlala endaweni eyimfihlo. Lokhu kungaba isitshalo sotshani, amahlamvu emifino, phansi phansi echibini (futhi lokhu kwenzeka) noma ihabhinethi ekhishini (ezinye izinambuzane zizala inzalo ekudleni). Ngemva kwesikhashana, izibungu zivela, ezibizwa nangokuthi izibungu. Ezimweni eziningi, ziyizinambuzane (ngaphandle kwezinhlobo zegazi). Esikhathini sokukhula nokuthuthukiswa, amacimbi angabhubhisa imikhiqizo izikhathi ezingamatshumi amavoti, futhi uma izinkulungwane namashumi ezinkulungwane, ziyakwazi ukudla imifino yonke, ibe uhlobo lwenhlekelele yemvelo. Ekugcineni, i-larva iba i-pupa (kwezinye izinhlobo zezinhlobo zentuthuko ayikho), futhi kuphela-i-butterfly.
Isigaba sokugcina sokuthuthukiswa kwe-lepopoptera asihlali isikhathi eside. Ezinye izinhlobo ezivela ngesikhathi lapho amaphiko okuqala wamaphiko e-butterfly ezenzeka khona bese ephila ngokoqobo ngamahora amaningana ngaphambi kokufa (abizwe ngokuthi okuthiwa "usuku olulodwa"). Kulesi simo, bangahlala iminyaka eminingana esiteji se-larva. Ukwakhiwa kwevemvane eyodwa-day akuhlinzeki uhlelo lokugaya - luyondla kuphela uma liyizibungu, "likhula", shiya inzalo ngesimo samaqanda bese ubhubha.
Kwamanye amazwe kukhona amapaki kanye nezingadi lapho lezi zinambuzane ezinhle, ezondliwa abantu, zihamba ngokukhululekile phakathi kwezimbali nezihlahla, zijabulisa izivakashi ngemikhuba yazo emangalisayo. Uma sibheka amaphiko evemvane, okuwaxosha kancane kancane, ahlala embali, kunzima ukukholelwa ukuthi uyisihlobo esiseduzane nesitshalo seklabishi esonakalisa isivuno. Kodwa kunjalo ngempela.
Lezi zidalwa ngezinye izikhathi zihle kakhulu kangangokuthi abantu bakulungele ukubukela amahora, ngokuphefumula, indlela abahamba ngayo kusukela embali kuya emifuleni, kepha ngezinye izikhathi bayinengiso futhi begazi. Kwenzeke ukuthi amaphiko amaphevemvane ahlotshaniswa nephethini enhle, efana nembali, kuyilapho abanye bebangela intukuthelo kuphela ngenxa yokulahlekelwa isivuno. Lokhu, ngokusobala, yiyona imfihlakalo eyinhloko yemvelo yeLepidoptera.
Izinhlobo ezifakiwe zefungi. Izinhlanzi nezilwane ezisengozini ye-fungi, izitshalo nezilwane ze-Red Data Book of Russia
Dzhozef Pristli - semvelo, isazi sefilosofi, umthaki wemithi. Biography ukuvulwa
Laser ububanzi, ukhethe kahle
Zifakwe emanzini anosawoti utamatisi ebhodweni ebusika. Recipe pickled utamatisi oluhlaza epanini